Indawo yaBucala-Amagumbi okulala ama-2-Ikhitshi eliPhezulu
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguGeri
Le yindawo yabucala! Eyakho nawe yedwa! Amagumbi amabini okulala, igumbi lokuhlambela eligcweleyo, indawo enkulu yokutyela ekhitshini enoluhlu, i-oveni, i-microwave, imbiza yekofu kunye nayo yonke into oyifunayo ukupheka ukutya (ngaphandle kokutya kunjalo). Igumbi lokulala ngalinye linebhedi epheleleyo, iitafile ezisecaleni kwebhedi, kunye needesika zomsebenzi okanye zokufunda. Ikhitshi inetafile enkulu yokutyela okanye umsebenzi othe saa kancinci! Kukho ugcino oluninzi kulo lonke igumbi kwaye umthi oqinileyo woqobo wongeza ubushushu, awunathuli kwaye kulula ukucoca iindawo zeendwendwe zexesha elide.
Igumbi lokulala ngalinye linebhedi enkulu egcweleyo, kunye nentuthuzelo kunye neelinen, iishiti ezongezelelweyo kunye neetawuli kwikhabhathi, enendawo eninzi yempahla yakho okanye izinto zomntu. Ikhitshi lixhotyiswe ngokupheleleyo ngezixhobo zobukhulu obupheleleyo, kunye neetoasta kunye neembiza zekofu ukwenzela ukuba ube lula. Igumbi lokuhlambela linebhafu yobungakanani obugcweleyo kunye neshawari, kunye nefestile yokukhupha umoya njengoko kufuneka.
Le ndlu ikwintliziyo yeMineola, ilungele iindawo zokumisa iibhasi ezinkulu (ibhloko enye kude) kunye ne-LIRR (uloliwe oya eNYC kunye neLong Island ziibhloko ezintandathu kude) kumgama wokuhamba ngokulula. Uninzi lweendawo zokutyela kunye neevenkile zamazwe aphesheya nezemveli zibeka kwesona sitrato sikufutshane (ibhloko ezi-2 kude) kwaye yindlela elula yokuqhuba ukuya elunxwemeni, kwiipaki, nakwiiholo zekonsathi kulo lonke elaseLong Island.
Umbuki zindwendwe ngu- Geri
Ndiyafumaneka njengoko kufuneka ukuphendula nayiphi na imibuzo okanye iinkxalabo, ukwenza naluphi na ulungiso olufunekayo, kunye nokuncokola nje ukuba ufuna njalo. Ndilandela iindwendwe zam kwaye ndibanike ingqalelo okanye ubumfihlo ababufunayo!
Ndiyafumaneka njengoko kufuneka ukuphendula nayiphi na imibuzo okanye iinkxalabo, ukwenza naluphi na ulungiso olufunekayo, kunye nokuncokola nje ukuba ufuna njalo. Ndilandela iindw…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Mineola